प्रवासीले बनाए पहिरो पिडितका ४० घर – धौलागिरी खबर
प्रवासीले बनाए पहिरो पिडितका ४० घर
धौलागिरी खबर	 २०७८ असार १, मंगलवार ०७:०४ गते मा प्रकाशित 624 0
मोनाले बिममा बनाएको पहिरो पिडितको घर । तस्बिर सौजन्य रेशम जुग्जाली
बेनी । प्रवासीहरुले म्याग्दीका पहिरो पिडितहरुको लागि ४० वटा आवास पुनःनिर्माण गरेका छन् ।
रोजगारी, अध्ययन, ब्यापार, ब्यवसाय लगायत बिभिन्न कामको शिलशिलामा बिदेशिएका म्याग्देलीहरु आवद्ध म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले पहिरो पिडितको आवास पुननिर्माण गरेको हो ।
मोनाको पुर्नवास कार्यदलका सदस्य दल शेरबुजाले पुननिर्माण भएका ४० वटा घर स्थानीय तह र प्रशासन मार्फत पिडितलाई उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । “मोनालाई जिम्मेवारी दिइएको घर पुननिर्माण सकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “निर्माण सकिएका घरमा केही पिडित सरिसकेका छन् ।”
विश्वका विभिन्न देशमा रहेका म्याग्देलीहरुले आर्थिक संकलन गरेर पहिरो पिडितको घर बनाएका हुन् । सम्बन्धित पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेका पिडितको घर पुनःनिर्माणका लागि छनौट गरिएको थियो ।
मोनाले प्रतिघर पुननिर्माणका लागि रु. पाँच लाख खर्च गरेको छ । पहिरो पिडितको आवास पुननिर्माणका लागि मोनाले रु. दुई करोड रुपैया जुटाएको थियो । धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४÷४ वटा घर निर्माण भएको छ । एक वटा भान्छाकोठा सहित तीन कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको हो ।
प्रवासी, स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग घर पुननिर्माणका लागि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले संयोजन गरेको छ । पहिरोबाट अति प्रभावित धवलागिरी गाउँपालिकाको मराङ र मालिका गाउँपालिकाको बिममा एकिकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार निजी आवास पुननिर्माण भएको छ ।
बिममा बिम–मालिका संघले रु. २० लाखमा खरिद गरेको जग्गामा मोनाले १० वटा घर निर्माण गरेको वडा अध्यक्ष रेशम जुग्जालीले बताउनुभयो । उहाँले बिमका अन्य पिडितहरुले पनि आफै घर निर्माण गरिसकेका बताउनुभयो ।
समुदाय स्तरबाट आर्थिक स्रोत जुटाएर रु. ३८ लाख ५० हजारमा मराङको राम्चेमा १६ र अस्कारेमा १२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो । वडा अध्यक्ष राजाराम सुबेदीले राम्चेमा थप ६ र आस्कामा ४ वटा घर निर्माण सकिएको बताउनुभयो ।
गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका थिए । ८१ वटा बस्तिमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
पहिरोबाट भत्किएको, बगेको र पुरिएको घर पुननिर्माण गर्न रु. ५ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन गत माघमा कार्यबिधी स्विकृत भएको थियो । गृह मन्त्रालयले पहिरो पिडितको घर पुननिर्माणका लागि गत बैशाख अन्तिम साता रु. एक करोड आठ लाख पठाएको थियो ।
मोनाले बनाएका बाहेकका घर पुननिर्माण गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु. दश करोड ३५ लाख बजेट आवश्यक पर्छ । संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुदानमा बन्ने घर पुननिर्माणले पनि तिब्रता पाएको धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले बताउनुभयो ।